यो उमेरमा हुन्छन् महिला सबैभन्दा सेक्सी ! | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
यो उमेरमा हुन्छन् महिला सबैभन्दा सेक्सी !
२०७४ कार्तिक २६, आइतबार ०८:३३ am | आजको पत्रिका
काठमाडौँ, २६ कात्तिक, उमेर जुनसुकै होस् महिला आफ्नो शरीरप्रति निक्कै सचेत हुन्छन् । आफ्नो अनुहारदेखि शरीरका हरेक अंगमा विशेष ख्याल गर्छन् । उनीहरु चाहन्छन् कि आफ्ना हातपाखुरा, औँला, नङ, जीउ, छाती, पेट, कम्मर, हिप, तिघ्रा, खुट्टा, पिडुला, नाक, मुख, आँखा, कान, कपाल सुन्दर र आकर्षक हुन् ।
ब्रिटेनको एक महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीले हालै एक सर्वेक्षण गरेको छ । जसमा ब्रिटेनका केही महिलाहरुलाई सोधिएको थियो कि, 'महिला हुन तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?' यो अध्ययनमा करिब २ हजार महिला सहभागि थिए । जसमध्ये तीन चौथाइले त्यस्तो सुवर्ण अवसर आए पनि आफ्नो शरीर परिवर्तन नगर्ने बताएका थिए अर्थात् उनीहरु सधैँ महिला नै हुन चाहन्छन् र महिला हुनुमा गर्व गर्छन् । यो सर्वेक्षणको परिणाम ब्रिटेनको समाचारपत्र डेली मेलमा छापिएको थियो ।
सो रिपोर्ट अनुसार महिलाहरु २८ वर्षको उमेरमा आफूलाई सबैभन्दा सेक्सी मान्छन् । यो उमेरमा महिलाहरु आफ्नो शरीरको आकारमा सबैभन्दा धेरै सन्तुष्ट वा खुसी रहन्छन् । यसैगरी महिलाको आत्मविश्वास ३२ वर्षको उमेरमा उच्च विन्दुमा पुग्दछ । यसको कारण आफूलाई सहयोग गर्ने साथी, पार्टनर वा परिवार भएको पनि पत्ता लागेको छ । महिलाको आत्मविश्वास घट्नुमा भने आफ्नो साथी वा पार्टनरले छोड्नु र दैनिक काममा आउने समस्याहरु प्रमुख कारण हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
तपाईंलाई आफ्नो कुन अंग सबैभन्दा सेक्सी वा आकर्षक लाग्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा २३ प्रतिशतले आँखा, २० प्रतिशतले स्तन र १३ प्रतिशतले दिमाग आकर्षक लाग्ने बताएका थिए । पाए आफ्नो कुन अंग चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ४१ प्रतिशत महिलाले आफ्नो तिघ्रा परिवर्तन गरेर लामो र खिरिलो बनाउन चाहेको बताएका थिए ।
सर्वेक्षणबाट यो पनि पत्ता लाग्यो कि, महिलालाई सबैभन्दा आनन्द आउने भनेको ड्रेसअप गरी तयार हुन, अग्लो हिलवाला जुत्ता लगाउन, मेकअप गर्न र हेयरस्टाइल बनाउन हो ।
तस्विर: Arianny Celeste (sasportsblog.com) सांकेतिक प्रयोग